St. Kitts & Nevis updates its COVID-19 travel requirements | Saint Kitts and Nevis travel news
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » I-St. Kitts & Nevis ihlaziya iimfuno zayo zokuhamba ze-COVID-19
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
I-St. Kitts & Nevis ihlaziya iimfuno zayo zokuhamba ze-COVID-19
Disemba 14, 2020
Kitts & Nevis yongeze ipropathi entsha kuluhlu lweehotele ezivunyiweyo zokuHamba zaBakhenkethi baMazwe ngaMazwe kunye nepropathi entsha yokuqesha abantu beLizwe / abahlali njengoko ilizwe leziqithi ezingamawele lamkela iindwendwe ezininzi kwaye zibuyisela abahlali / abahlali kunxweme lwayo. Zonke ezinye iimfuno zohambo ezichazwe ngezantsi zihlala zingatshintshanga kwaye kufuneka zithunyelwe ngabo baceba uhambo oluya kwi-Federation ngexesha leSigaba 1 sokuphinda kuvulwe. Bonke abagibeli abangenayo eSt. Abahambi bamanye amazwe kufuneka babe novavanyo olubi lwe-RT-PCR kunye nendawo yokuhlala yokubhukisha ukuze bagcwalise iFom yoGunyaziso loKhenketho efunekayo ukuze kungenwe. Nje ukuba ifom igcwaliswe kwaye ingeniswe, nedilesi efanelekileyo ye-imeyile, iya kuphononongwa, kwaye undwendwe luya kufumana ileta evunyiweyo yokungena kwi-Federation.
Inkqubo yeFederal yokuvula kwakhona ichaza iimfuno ezithile zokuhamba zabahambi abafika ngoMoya nangolwandle kwiSigaba 1.
Abahambi abafika ngoMoya (iiJets ezizimeleyo, iiChart kunye neenqwelomoya zorhwebo) nceda uqaphele apha ngezantsi:
Abahambi bamanye amazwe (Abangengobesizwe / Abangahlali)
Abahambi abavela kwiCaribbean (kubandakanya abo bakwi "CARICOM bubble yokuhamba"), e-US, Canada, e-UK, eYurophu, e-Afrika nase Mzantsi Melika. Aba bahambi kufuneka bafezekise ezi mfuno zilandelayo:
Gcwalisa ifom yokuGunyazisa uKhenketho kwiwebhusayithi yesizwe kwaye ulayishe ngokusemthethweni IPHEPHA 19 Isiphumo sovavanyo lwe-RT-PCR esingalunganga esivela kwi-CLIA / CDC / UKAS evunyiweyo ilebhu evunyelweyo ngomgangatho we-ISO / IEC 17025, ethathwe ngaphambi kweeyure ezingama-72 zokuhamba. Kuya kufuneka beze nekopi yovavanyo olubi lwe-COVID 19 RT-PCR kuhambo lwabo.
Yenza uvavanyo lwezempilo kwisikhululo seenqwelomoya kubandakanya ukujonga ubushushu kunye nephepha lemibuzo lezempilo.
Khuphela i-SKN COVID-19 yoqhakamshelwano lokulandelela usetyenziso lweselfowuni (iinkcukacha ezipheleleyo zisaza kukhutshwa), eza kusetyenziswa kwiintsuku ezili-14 zokuqala zokuhamba okanye ngaphantsi.
Iintsuku ezi-1 ukuya kwezi-7: iindwendwe zikhululekile ukuba zihambe malunga nepropathi yehotele, zinxibelelane nezinye iindwendwe kwaye zithathe inxaxheba kwimisebenzi yehotele.
Iintsuku eziyi-8 ukuya kwezi-14: iindwendwe ziya kuvavanywa i-RT-PCR (i-USD 150, iindleko zeendwendwe) ngomhla wesi-7. Ukuba umhambi uvavanya ukuba akanalo ngosuku lwe-8 bavumelekile, ngokubhukisha kwidesika yehotele, babekhe uhambo kunye nokukhetha ukufikelela Iindawo zokufikela (iinkcukacha kutyelelo olukhoyo ngezantsi)
Iintsuku ezili-14 okanye ngaphezulu: iindwendwe ziya kudinga ukwenza uvavanyo lwe-RT-PCR (i-USD 150, indleko yeendwendwe) ngomhla we-14, kwaye ukuba kuvavanywa ukuba akunjalo umhambi uya kuvunyelwa ukuba adibanise eSt Kitts naseNevis.
Abahambi abahlala ubusuku obu-7 okanye ngaphantsi, kufuneka bathathe uvavanyo lwe-RT-PCR (i-USD 150, indleko yeendwendwe) iiyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba. Uvavanyo lwe-RT-PCR luya kwenziwa kwipropathi yehotele, kwisikhululo sikanesi. Icandelo loMphathiswa Wezempilo liya kucebisa ihotele efanelekileyo, ngomhla kunye nexesha lovavanyo lwe-RT-PCR yomhambi ngaphambi kokuhamba. Ukuba ulungile ngaphambi kokuhamba, umhambi uya kucelwa ukuba ahlale yedwa kwindleko zabo. Ukuba akunjalo, abahambi baya kuqhubeka nokuhamba ngomhla wabo.
Ukufika kwabo ukuba uvavanyo lwe-RT-PCR lomhambi luphelelwe lixesha, luchanekile okanye ukuba babonisa iimpawu ze-COVID-19 baya kucelwa ukuba benze uvavanyo lwe-RT-PCR kwisikhululo seenqwelomoya ngeendleko zabo.
Iihotele ezivunyiweyo zabahambi bamanye amazwe zezi:
IGolden Rock Inn
Irizothi yeKooi, eseCurio, eHilton
Iklabhu yoLwandle lwaseMarriott
Ihotele yaseRoyal St. Kitts
Irizothi yeSt. Kitts Marriott
Abahambi bamanye amazwe abanqwenela ukuhlala kwikhaya labucala eliqeshisayo okanye kwi-condo kufuneka bahlale kwipropathi esele yamkelwe njengendawo yokuhlala yedwa ngendleko zabo, kubandakanya nokhuseleko.
Ngeli xesha olona hambo luvulekileyo kubakhenkethi bamanye amazwe luhambo lwaseKittitian olubandakanya utyelelo kuTimothy Hill ongayijonganga, isixeko esilikomkhulu leziza zembali zeBasseterre kunye neBrimstone Hill Fortress, iZiko leLifa leMveli le-UNESCO.
Abemi ababuyayo, abahlali (ubungqina besitampu sokuhlala kwipasipoti), abanini besitifiketi seCaribbean yeNtengiso eNye (CSME) kunye nabanini beemvume zokusebenza
Abahambi ababuyayo abahlali, abahlali (ubungqina bendawo yokuhlala kwipaspoti), abanini bezitifiketi zeCaribbean Market Market (CSME) kunye nabanikazi beMvume yokuSebenza). Aba bahambi kufuneka bafezekise ezi mfuno zilandelayo:
Gcwalisa ifom yokuGunyazisa uKhenketho kwiwebhusayithi kazwelonke kwaye ulayishe iziphumo zovavanyo ezingekho mthethweni ze-COVID 19 RT-PCR ezivela kwi-CLIA / CDC / UKAS evunyiweyo ilebhu evunywe ngumgangatho we-ISO / IEC 17025, ethathwe ngaphambi kweeyure ezingama-72 zokuhamba. Kuya kufuneka beze nekopi yovavanyo olubi lwe-COVID 19 RT-PCR kuhambo lwabo.
Nawuphi na umhambi okweli nqanaba uya kuvunyelwa ukuba angene kwi-Federation kwaye athunyelwe kwindawo yokuhlala eyamkelweyo, apho baya kuhlala khona ngendleko zabo iintsuku ezili-14 bodwa. Iindleko zokuvalelwa yedwa kwiziko likaRhulumente e-Bird Rock Apartment Complex yi-USD 500.00, i-OTI yi-USD 500.00, kwi-Potworks yi-USD 400.00 kwaye iindleko zovavanyo ngalunye lwe-COVID-19 yi-USD 100.00. Abemi ababuyayo kunye nabahlali banokukhetha ukuhlala kwindawo yokuhlala evunyelweyo kwangaphambili ngendleko zabo, kubandakanya ukhuseleko olufanelekileyo.
Iindawo zokuhlala ezivunyiweyo zezi:
Indlu yeNdawo yeRock Rock
I-Ocean Terrace Inn (OTI)
Ihotele iOualie Beach
Nawuphi na umhambi okweli candelo onqwenela ukuhlala kwenye yeehotele ezisibhozo (8) ezivunyiweyo ze “Vacation in Place,” zaBahambi baMazwe ngaMazwe kufuneka benze oku kulandelayo:
Iintsuku eziyi-8 -14: iindwendwe ziya kuvavanywa i-RT-PCR (i-USD 100, iindleko zeendwendwe) ngomhla wesi-7. Ukuba umhambi uvavanya ukuba akanalo ngosuku lwe-8 bavunyelwe, kwidesika yokhenketho yehotele, ukubhukisha iindawo zokuhamba kunye nokukhetha ukufikelela Iindawo zokufikela (ezidweliswe apha ngasentla phantsi kweemfuno zabahambi bamanye amazwe).
Iintsuku ezili-14 okanye ngaphezulu: iindwendwe ziya kudinga ukwenza uvavanyo lwe-RT-PCR (i-USD 100, iindleko zeendwendwe) ngomhla we-14, kwaye ukuba kuvavanywa ukuba akukho mntu umhambi uya kuvunyelwa ukuba adibanise eSt. Kitts naseNevis
Abakhweli abathuthayo kwisikhululo seenqwelomoya iRLB mabaqwalasele ezi mfuno zilandelayo:
Bonisa isiphumo esibi se-COVID-19 RT-PCR xa ufika
Kufuneka unxibe imaski ngalo lonke ixesha
Yenza uvavanyo lwezempilo kwisikhululo seenqwelomoya
Kufuneka uhlale kwisikhululo seenqwelomoya emva kokucoca amasiko
Abahambi kufuneka bafumane ilebhu kwindawo yabo ebonelela ngovavanyo lwe-RT-PCR olunokugqitywa kwiwindows-yeeyure ezingama-72 ezifunekayo. Nceda uqaphele, umhambi unoxanduva lokuqinisekisa ukuba ilebhu yi-CLIA / CDC / UKAS ilebhu evunyiweyo ene-ISO / IEC 17025 yokuvunywa, njengoko iziphumo ezivela kwilabhoratri engagunyaziswanga aziyi kwamkelwa.
Ulwazi oluqulethwe kwiTestforTravel.com lulungiselelwe iinjongo zolwazi kuphela. I-St. Kitts yoGunyaziwe wezoKhenketho kunye ne-Nevis yeGunya lezoKhenketho abanalo ubudlelwane neTestforTravel.com kwaye abalukhuthazi olu luhlu okanye iilebhu ezithile ezidweliswe kulo. Nokuba iSt. Kitts kunye neNevis yeGunya lezoKhenketho okanye iGunya lezoKhenketho laseNevis abenzi zimvo okanye iziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo ngokubhekisele kwiTestforTravel.com kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, ukuchaneka okanye ukugqibelela kwalo naluphi na ulwazi kunye nezibakala eziqulathwe apho.
Abahambi Abafika ngolwandle (iinqanawa zabucala umz. IiYachts) nceda uqaphele apha ngezantsi:
Abahambi abafika kumazibuko elizwe kufuneka bahlangabezane nezi mfuno zilandelayo:
Gcwalisa ifom yokuGunyazisa uKhenketho kwiwebhusayithi yesizwe kubandakanya ubungqina bovavanyo olubi lwe-RT-PCR. Uvavanyo kufuneka lwenziwe kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kokumka kwizibuko lokugqibela lomnxeba okanye lwenziwe ngaphambi kokunduluka ukuba baselwandle ixesha elide kuneentsuku ezintathu.
Inqanawa iyakufuneka ime kwizibuko elinye lamathandathu, ingenise iSibhengezo seMpilo seLwandle kwigosa lezempilo kwizibuko kwaye inxibelelane nezinye iiarhente zemida. La mazibuko mathandathu ngala: i-Deepwater Port, iPort Zante, iChristophe Harbour, iNew Guinea (iSt. Kitts Marine Works), iCharlestown Pier neLong Point Port.
Aba bahambi baya kulungiswa ngokufanelekileyo kwaye baya kuthatha iholide endaweni okanye babeke bodwa njengoko kuchaziwe ngaphambili. Ixesha elimiselweyo lokuvalelwa lodwa liya kugqitywa ziinqanawa okanye ixesha lokuhamba ngenqanawa ukusuka kwindawo yokugqibela yomnxeba ukuya ekufikeni kwabo kwi-Federation. Ixesha lokuhamba kufuneka lixhaswe ngamaxwebhu asemthethweni kunye nenkqubo yesaziso ecacisa kwangaphambili.
Izikhephe kunye neenqanawa zokuzonwabisa ngaphezulu kweenyawo ezingama-80 kufuneka zibekelwe bodwa eChristophe Harbour eSt. Izikhephe kunye neenqanawa zokuzonwabisa ezingaphantsi kweenyawo ezingama-80 kufuneka zibekelwe bucala ezi ndawo zilandelayo: IBallast Bay eSt. Kitts, iPinney's Beach kunye neGallows eNevis. Kukho umrhumo wokubek'esweni ii-yachts kunye neenqanawa zokuzonwabisa ezingaphantsi kweenyawo ezingama-80 ezibekelwe bucala (umrhumo oza kubhengezwa kamva).
I-CDC okwangoku ixabisa iSt Kitts kunye neNevis njengeNqanaba 1: Umngcipheko ophantsi we-COVID-19, unamatyala angama-27 kuphela e-coronavirus, akukho kufa kwaye akukho kusasazeka koluntu.
Abathathi-nxaxheba kuwo onke amacandelo oshishino baqeqeshiwe kwiinkqubo zethu zempilo nezokhuseleko, ezibandakanya inkqubo ebanzi yokuhlola kunye nokubeka iliso ukukhuthaza wonke umntu ukuba agcine imigangatho esisiseko. Abathathi-nxaxheba abathathe inxaxheba kuqeqesho bafumana izatifikethi kunye neshishini elihloliweyo kwaye lahlangabezana neekhrayitheriya "Zokuvunywa kokuHamba", baya kufumana iTywina labo "lokuVunywa kokuHamba".
Ngokukodwa, inkqubo "yokuVunywa kokuHamba" ifezekisa izinto ezimbini:
Inikezela ngoqeqesho “lokuVunywa kokuHamba” kwabachaphazelekayo kwezokhenketho kunye nokuwonga itywina "lokuVunywa kokuHamba" kula mashishini adibanayo, iSt. Kitts yeGunya lezoKhenketho kunye nemigangatho yohlolo loMphathiswa Wezempilo.
Ivumela iSt. Kitts kunye neNevis kwiiwebhusayithi zazo, ukukhuthaza loo maziko eshishini afumene itywina "lokuVunywa kokuHamba". Abo bangenalo itywina abavunyelwanga iindwendwe.
Iindwendwe ziya kucelwa ukuba zilandele iinkqubo ezisisiseko zempilo kunye nezokhuseleko zokuhlamba izandla rhoqo kunye nokucoca, ukuphambana ngokwasemzimbeni nokunxiba imaski. Iimaski ziyafuneka nanini na xa undwendwe lungaphandle kwegumbi labo lasehotele.